#Simbirtuu! Gabaasa Walgahii PP Amaaraa fi Oromiyaa | Kichuu
Posted on April 13, 2021 by kichuu_admin
Gabaasa Walgahii PP Amaaraa fi Oromiyaa
Torbee darbe dabballoonni Biltsiginnaa damee Amaaraa fi Oromiyaa walgahii lama taasifatanii turan. Walgahiin kunis yeroo tokko waajjira President Oromiyaatti yeroo biraa ammoo waajjira Biltsiginnaa damee Oromiyaatti akk ture ni yaadatama.
Walgahii kanarratti ajandaan maal ture? Eenyutu maal jedhee fi akkamitti guduunfame gaaffilee jedhaniif odeeffannoo keessoo mootummaati argame kunooti.
-Ajandaan Maal Ture? – Marii taasisudhaan garaagarummaan akka hin jirre meediyaatti ba’anii waliin ibsa kennuu. Kallattiin kun MM Abiyyi Ahimadiin ka’ame.
-Naannoon Amaaraa Maal Gaafate?
Gaaffilee gurguddaa afur gaafate. Isaanis,
1. Humna Addaa Amaaraa Oromiyaa bakkoota Amaarri qubatee jiru keessa akka qubatu.
2. Caasaa Bulchiinsa Aanaa fi gandaa keessatti qooda akka hirmaatan.
3. Uummanni Amaaraa Oromiyaa keessa qubatee jiru leenjii gabaabaa fudhatee qawwee akka hidhatuu fi
4. Ummata Amaaraa Oromiyaa keessatti sodaa nageenyaaf buqqa’aa jiru naannawaa Finfinneetti akka qubatan kan jedhu gaaffiin barreeffamaan dhiyaateera.
Gama Biraatin Gaaffilee kanaaf Warri Oromiyaa Hoo Maal Jedhan?
Abbaan ajandaa jara Amaaraa waan turaniif gaaffilee ka’aniif Warri Oromiyaa deebii itti kennuuf yaalanii jiru. Deebii kenname keessaa:
1. Humna Addaa Amaaraa galchuun uummata nurratti kaasaa waan taheef bakka isaa Makkalaaakayaan yaa qubatu.
2. Ummata Amaaraa qawwee hidhachiisuu kan jedhu kallattiin ka’amee sirrii dha. Ammas minishoota hedduutu Poolisii Oromiyaa wajjiin hojjetaa jira. Ammas dabalataan akka gara milishaatti galanii hidhatan ni hojjenna. Uummanni dhuunfaadhaan qawwee bitate seera qabeessa ni gonaaf jedhanii waadaa galan.
3. Qubannaan gara Naannawaa Finfinneetti ammaaf hojii nutti baayyisa, ajandaa hin taane nutti uuma. Kanaaf yaa turu jedhan.
4. Caasaa Bulchiinsaa aanaa fi gandaa keessatti galchuuf hojjetamaa jira. Yeroo xiqqoo booda afaan hojii naannoo Oromiyaa Amaarinyaa fi Afaan Oromoo goona. Dubbiin kunis achumaan hiikkata. Kana ammoo sagantaam Biltsiginnaatu nu ajeja jedhanii guduunfan.